သင်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး လိုအပ်လျှင် ...
သောကြာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 8, 2010 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 18, 2014 Scott Hardigree
ဒီ post ဟာအီးမေးလ်လမ်းကြောင်းကနေပိုပြီးတန်ဖိုးယူနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသိထားသူတွေအတွက်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ပြင်ပမှကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်မည်သည့်ကိစ္စပင်ဖြစ်ပါစေ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်အိမ်တွင်းအခွက်တဆယ်; ဒီလမ်းညွှန်ကသင့်ရဲ့လက်ရှိအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အီးမေး (လ်) သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းခွင်အဖြစ်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာခဲ့ပြီဖြစ်ရာမကြာမီပြောင်းလဲတော့မည်မဟုတ်ချေ။ ၎င်းသည်အချက်အလက်များကိုမောင်းနှင်သောကြောင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်ရောင်းအားမောင်း။ ဆက်ဆံရေး၊ သစ္စာရှိမှုနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်သည်။ အခြားတိုက်ရိုက်ချန်နယ်များမှတဆင့်ရောင်းအားကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။
ထိုအဆိုအရ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းသည်သုံးစွဲငွေဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာအတွက် ၄၃.၆၂ ဒေါ်လာအမြတ်ရရှိသည်။
ကအကျဉ်းချုပ် MarketingSherpa ပြည်နယ်များ, သူတို့၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်များ၏ထိရောက်မှုလျော့နည်းသွားသည်ကိုတွေ့မြင်သူများသည်နည်းဗျူဟာအပေါ်အမြင်အာရုံတိုသောအဖွဲ့အစည်း၏သဘောထားများရှိရန်ပိုများသည်။ အီးမေးလ်အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အခြေခံသောအမြင်များရှိသောအဖွဲ့အစည်းများသည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းကြသည်။
အဆိုပါ CMO ကောင်စီ'' Marketing Outlook '08 အစီရင်ခံစာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူ ၆၅၀ ၏အစီအစဉ်နှင့်ထင်မြင်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အဓိကပစ်မှတ်wasရိယာဖြစ်သည်။
လက်လီရောင်းချသူများ၏စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် Shop.org “ အီးမေးလ်သည်ဖော်ပြခြင်းတွင်အအောင်မြင်ဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်
သင် (သင်သို့မဟုတ်သင်၏အဖွဲ့ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်) သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုသိသည်။ အီးမေးလ်စျေးကွက်ကိုသင်ကျွမ်းကျင်ပါသလား။
သင်၏ပေါင်းစည်းထားသောစျေးကွက်နှင့် CRM သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
သင်၏အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်သည်သုတေသနနှင့် / သို့မဟုတ်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ်အခြေပြုပါသလား။
၎င်းတို့သည်အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော ROI တစ်ခုကိုဖန်တီးသလား။
အီးမေးလ်စျေးကွက်တွင်ဖောက်သည်များဝယ်ယူခြင်း၊ ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများပြန်လည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုတို့ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာများစွာသောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပါဝင်နိုင်သည် -
အယ်ဒီတာ့အာဘော် & မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း
ဒီဇိုင်း & ကုဒ်
List ကိုအပိုင်း & List Enhancement
အပြုအမူ & ဖောက်သည် Profiling
မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ & ပေးပို့နိုင်ခြင်းစောင့်ကြည့်
အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (ESP) သို့မဟုတ်စာပို့ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်အကဲဖြတ်မှုများ
ဦး ဆောင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက် / တက်ခြင်း / လက်ဝါးကပ်တိုင်အရောင်းရဆုံး
Multivariate စမ်းသပ်ခြင်း & Program ကို Optimization
အထက်ပါစာရင်းသည်သင်လုပ်နေသည်ထက် ပို၍ ပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်ဤအကျိုးအမြတ်မြင့်မားသောချန်နယ်ကိုအသုံးမပြုခြင်းအတွက်အားကောင်းသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အသစ်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အတွက်အချိန်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ဘတ်ဂျက်များကိုပြန်လည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်သင့်အိမ်တွင်းအဖွဲ့အားပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်လိုအပ်ကောင်းလိုမည်လော။
သင် (တရားဝင်) သင်အကူအညီလိုအပ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီးပါက၊ သင်၏ဒုတိယလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပြီးသင်၏ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအရည်အချင်းရှိသောအရည်အချင်းကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်၊
Tags: cmo ကောင်စီCRM ပေါင်းစည်းမှုတိုက်ရိုက် marekting အသင်းအဖွဲ့အီးမေးလ်နှင့်လက်လီအီးမေးလ် CRMအီးမေးလ်ပေါင်းစည်းမှုအီးမေးလ်စျေးကွက်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြန်လာအီးမေးလ်ပိုကောင်းအောင်အီးမေးလ် roiMarketingSherpaလက်လီshop.org
HTML5၏ပြည့်စုံသောကြိုတင်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှု
8:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 10
Scott - ဒီဟာမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအချက်ပဲ။ အကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်! ကုမ္ပဏီများစွာသည်၎င်းတို့တွင်ရှိသည့်အရင်းအမြစ်များနှင့်ရုန်းကန်နေရပြီးသူတို့၏အလားအလာကိုမမီနိုင်ကြပါ။ ဒါကကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ခြင်းဟာအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။
8:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 41
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug! အပိုင်း (၂) တွင်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူကိုငှားရမ်းရန်လမ်းညွှန်မူ (၈) ခုကိုငါဖော်ပြမည်။